नतालिया Dyachkova: को "करेलियन बनबिलाव" को भाग्य
खेल र फिटनेस, मार्शल आर्ट्स
थाई बक्सिङ - थाईल्याण्ड को राष्ट्रिय खेल, यो शैली को लडाकूको प्रशंसक हजारौं को मूर्तिहरू छन्। च्याम्पियन्स Royals अवार्ड। तर, बलियो खेलाडीहरूलाई को एक, छैन भने बलियो, रूस बसोबास। जसको जीवनी चासो छ नतालिया Dyachkova, को एमेच्योर सबै कल्पना र inconceivable पुरस्कार र शीर्षक, साथै एक समर्थक भेला भए।
खेलाडीहरूलाई को इतिहास एकदम मार्शल आर्ट देखि बालिका लागि atypical छ। सामान्यतया आमाबाबुले छोरी गर्न कडा विरोध यस्तो दर्दनाक खेल मा लगे, तर बुबा आफैले कोच गर्न नतालिया ल्याए, उनको लडाकू गर्न कटिबद्ध।
नतालिया 1994 मा पेट्रोजाभोड्स्क मा जन्म भएको थियो Dyachkova। त्यो चार वर्षको हुँदा आमा परिवार छोडेर Natasha आफ्नो बाबु र आफ्नो हजुरआमा संग हुर्केका थिए।
परिवार बस्ने Dyachkova इवान Andrienko कोच घर को छिंडीमा उहाँले भएकालाई र मार्शल आर्ट गर्दै जाने गर्न थाले जो खण्ड, खुलेको छ। यहाँ र म 11 वर्षीया नतालिया पिता ल्याए।
पहिलो केटी सफल भएन मा, त्यो एक पंक्ति मा सबै गुमाए। उनको जीवन मा मोड 2009 मा आए। स्थानीय प्रतियोगिता एक पटक अभागी खेलाडी पराजित गर्ने सबै बालिका, उपस्थित थियो। नतालिया Djachkov आफैलाई मा क्रोधित, साहस कठिन विरोधीहरूले विरुद्ध तीन खेलमा आयोजित, र एक नकआउट सबै पठाए। कडा प्रशिक्षण र अपमानजनक पराजय तीन वर्ष व्यर्थमा भएको छैन।
त्यसपछि रूस, राष्ट्रिय टोलीलाई निमन्त्रणा को जूनियर च्याम्पियनशिप मा विजय पछि लागे। आफ्नो पहिलो विश्व च्याम्पियनशिप नतालिया Dyachkova मा म 2009 मा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न घरेलू देखि आकस्मिक संक्रमण बलियो वर्ण केटी हालन छैन। यसको प्रतिद्वन्द्वी धेरै 2-3 पुरानो वर्ष थिए भन्ने तथ्यलाई बावजुद, त्यो, मर्यादा संग गर्नुभएको छ अन्तिम, दुर्भाग्यवश, टर्की खेलाडी हराएको जहाँ पुग्यो भएको।
पुरस्कार र बेल्ट
खेलकुद मिडिया पहिले नै देखा कि चाँडै नतालिया Djachkov फोटो, थाई बक्सिङ पहिलो रूसी नम्बर बन्नेछ। खेलाडी व्यावसायिक झगडे संग अवैतनिक स्तरमा प्रदर्शन जोडती।
यो पनि रूस मा च्याम्पियनशिप विजेता, वुसु Sanda जस्तै मार्शल आर्ट यस फारममा नै प्रकट।
दुई वर्ष टर्की खेलाडी को हार पछि Natalya Dyachkova विश्व कप अर्द्ध-फाइनलमा उनको बदला लिन्छ। तर एक लडाई मा त्यो जो छ, आफ्नो खुट्टा injures किन उनको अन्तिम युद्धको मुख्य लक्ष्य - युक्रेनी विरुद्ध सबै राउंड्स प्रतिरोध गर्ने क्षमता। त्यसैले एक पङ्क्ति नतालिया मा दोस्रो पटक विश्व च्याम्पियनशिप को चाँदी medalist भयो।
यो 2012 मा खेलाडीहरूलाई लागि विशेष गरी सफल जारी। यसलाई व्यवसायीक संस्करण WPMF बीचमा विश्व च्याम्पियन बन्नेछ, र विशेष गरी आदरणीय छ थाई बक्सिङ, को मातृभूमि मा गर्छ। एउटै सिजन मा त्यो घर विश्व कप, सेन्ट पीटर्सबर्ग मा आयोजित मा सुन पदक जित्यो।
केटी त्यहाँ छाडेनन्। युरोपेली च्याम्पियनसिप यसको विजय, विभिन्न व्यावसायिक संस्करण नयाँ बेल्ट को खातामा।
आफ्नो पहिलो वयस्क 2015 विश्व च्याम्पियनसिप मा, त्यो पनि मुख्य मनपर्ने छलफल भएको थियो। यद्यपि, यो प्रतियोगिताको अन्तिम मा त्यो एक बलियो स्वीडिश खेलाडी गर्न गुमाए। नतालिया Dyachkova सधैं कठिन आफ्नो हार मार्फत सबै त्रुटिहरू बदला लिन पक्का हुन गएर र विश्लेषण।
उपनाम को मूल
नतालिया उपनाम को एक उत्सुक कथा। एक पटक त्यो लड मृत्यु सैनिकहरु को स्मृति समर्पित प्रतियोगिताको मा प्रदर्शन भएको छ। लडाकूको आमा झगडे खेलाडी पछि त्यो बनबिलाव रूपमा निडर भई र आक्रामक झगडे बताए।
केही दिन पहिले संसद भवन गर्न Karelia बनबिलाव को जंगल को बाहिर भाग्यो। नतालिया भाग्य को एक चिन्ह छलफल र आफ्नो तरिका को एक कुलदेवता रूपमा यो जनावर छनौट गरे। यो पनि शहर चिडियाघर मा प्रायोजन बनबिलाव लागि यसको आफ्नै आभारी छ, त्यो निरन्तर दौरा।
नतालिया Dyachkova: प्रेम जीवन
forcefully र आक्रामक, duels जस्तै एक खेलाडी रूपमा घन्टी प्रेरित बाहिर। उनको स्वीकार मा, त्यो उनको हेरविचार गर्नेछन् लागि प्रतीक्षा थिएन, र व्यक्तिगत एक उपग्रह गरे।
त्यो विवाहित छैन, तर एक जवान पूरा गर्दा - आफ्नो Mistress छोरा।
एक बच्चाको रूपमा, नतालिया Dyachkova हार्ड परिवारको आफ्नो आमाको हेरविचार मार्फत जाँदै। धेरै वर्ष को लागि उनको बचा र मेरी हजुरआमा मृत्यु संवाद पुन: सुरु मात्र पछि।
आफ्नो युवा उमेर भए तापनि नतालिया कोचिंग संग प्रशिक्षण संयोजन गर्न प्रबन्धन। त्यो संगठित क्लब लिन्कस क्लब लडाई आफ्नो पैतृक पेट्रोजाभोड्स्क मा थाई को संघ बक्सिङ खुलेको छ। यो Dyachkova थाई बक्सिङ सबैको मूल कुराहरू सिकाउँछ। आज नतालिया सत्र जनसंख्याको सबै खण्डहरू उपस्थित - लेखकले, वकिल। खैर, आफ्नो pupils च्याम्पियन केही पहिले नै खेल गर्न नेतृत्व गरेको छ - तिनीहरूले ठूलो टूर्नामेंट जानुहोस्।
रूस मा मार्शल आर्ट को एक विदेशी फारम - पारिवारिक समस्या र वित्त समस्या भए तापनि नतालिया Dyachkova थाई बक्सिङ मा मजबूत को एक बन्न व्यवस्थित। यसको प्रतिद्वन्द्वी धेरै शक्ति अनुभव र गति महिमित धक्का "करेलियन trot।"
Shults मार्क - एक लडाकु र प्रशिक्षक
मार्को एण्टोनियो Barrera - सबै समय को एक पौराणिक कथा
आफ्नो मुट्ठी कसरी पिट्न, त्यो हात छैन injuring छ
लुइस ओर्टिज: क्युबा देखि undefeated विशाल
मार्क हंट - न्यूजील्याण्ड च्याम्पियन
Deontey Uaylder - हराइदिन्छ थाह छ जो एक च्याम्पियन
रूसी रक्षक Chicherin Nikita
पुतली सिंड्रोम: epidermolysis bullosa
फरक deuterostome र protostomes जनावर के हो
कानून र विरोधी भ्रष्टाचार को गतिविधिहरु प्रभावित नियमहरु। № डिसेम्बर 25, 2008 को 273-FZ "भ्रष्टाचार मुकाबला मा"
झिंगा संग सीजर सलाद - खाना पकाउने नुस्खा
बाख्रा Willow Pendula: रोपण र हेरविचार, छाँट्ने, रोग, समीक्षा, फोटो
हाइड्रोलिक्स के हो? अवधारणा परिभाषित
प्रभावकारी वजन लागि ककडी आहार kefir? महिला समीक्षा
चूहों र चूहहरुमा देखि गोंद। चूहों देखि गोंद: समीक्षा, मूल्यहरू विवरण
के सपना एक औंला वा कपाल काटेर? oneiromancy
डेस्कटपमा इस्टर वालपेपर